रामकुमारी झाँक्री फेरि भाइरल, श्रीमान् बने कारण — Sanchar Kendra
रामकुमारी झाँक्री फेरि भाइरल, श्रीमान् बने कारण
काठमाडौ । बेला बेला चर्चामा आइरहने प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रि मण्डल विस्तार गरेसँगै सहरी विकास मन्त्री बनेकी रामकुमारी झाँक्री फेरि भाइरल भएकी छन् । संधै चर्चा आइरहने उनी यो पटक श्रीमानका कारण भाइरल भएकी हुन् ।
नेपाल पृति सत्तात्मक समाजबाट निर्देशित छ । श्रीमानले श्रीमतिलाई दिएको निर्देशन अनुसार नेपालीहरुको घर चल्ने गरेको छ । तर झाँक्रीका लागि भने ठिक उल्टो भएको छ ।
उनले आफ्ना श्रीमान पशुपति पुरीलाई सार्वजनिक रुपमा निर्देशन दिएपछि फेरि एकपटक चर्चामा आएकी हुन् । देउवा सरकारमा रामकुमारी झाँक्री नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट मन्त्री बनिन् । उनी मन्त्री बनेकै मन्त्रालयमा उनका पतिको काज सरुवा भएको छ ।
उनी उपसचिवका रुपमा सोही मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । उनले अहिले सहरी विकास मन्त्रालय हाँक्ने जिम्मेवारी पाएकी छन् । सहरी मन्त्रालयमा उनको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने काममा छन् पति पशुपति पुरी ।
मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्ना साथ उनले कुर्सीमा बस्दै कर्मचारीलाई निर्देशन दिइन् । मन्त्रीका लागि गर्नुपर्ने ब्रिफिङ दसैं अघि नै गर्नुहोला । समय कम छ गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । उनलाई व्रिफिङ गर्नेमा पर्छन एक जना उनकै पति पशुपति ।
वि.स. २०३४ सालमा गुल्मीको मयाल पोखरी गाविसमा जन्मिएकी झाँक्रीको राजनीतिक यात्राहरु उकाली ओराली छन् । ०६५ सालमा पोखरा महाधिवेसनबाट तत्कालीन नेकपा (एमाले) को विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुको अध्यक्षमा चुनिएकी उनी कक्षा ७ मा अध्ययनरत रहँदै विद्यार्थी राजनीतिमा होमिएकी थिइन् ।
कलिलै उमेरमा विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेकी उनी ०६५ सालमा अनेरास्ववियुको अध्यक्ष भएर राजनीतिक यात्रालाई चुलीमा पुर्याइन् । अनेरास्ववियुको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि उनी राजतन्त्रविरुद्ध सडकमा उत्रिइन् । २०६१ सालमा राजाले सैनिक परिचालन गरेर ‘कु’ सत्ता हातमा लिँदा झाँक्री राजतन्त्रविरुद्ध ज्यान दिन सडकमा उत्रेर विरोध गरिन् ।
तर, राजनीतिक जीवनमा होमिएका झाँक्रीलाई अघि बढ्न उनका श्रीमान् पशुपति पुरीको उत्तिकै साथ छ । उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दा श्रीमान पुरीकै रोहबरमा रिहा गरिएको थियो ।
पुरी अहिले नेपाल सरकारको उपसचिव पदमा कार्यरत छन् । क्याफेमा भेट भएर चिनजान भएका झाँक्री र पुरीको स म्ब न्ध विवाहमा परिणत भयो । झाँक्री मगर समुदायका हुन् भने पुरी आर्य समाजका ।
तैपनि विचार र सिद्धान्त मिलेपछि पशुपति र रामकुमारीको चिनापर्ची भएको ५ वर्षपछि अर्थात् २०६६ माघ २९ गते विवाह भयो । पुरी अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको उपसचिवको रुपमा कार्यरत छन् । उनी धनकुटावासी हुन् भने झाँक्री गुल्मीकि हुन् ।
मध्यराति कमल थापा र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबीच गोप्य भेट भएको खुलासा, यस्तो रहस्य खुलेपछि सबै चकित
आफूमाथि जाइलागेपछि रेखा थापाले फर्काइन् कमल थापालाई यस्तो कडा जवाफ, के-के भनिन ?
राजेन्द्र लिङ्देनले चुनाव जितेपछि हिमानी शाह भाइरल, के गरिन त्यस्तो ?
‘से’क्स’ वाला स्कुटरका कारण कलेजकी छात्रालाई घरबाहिर निस्किनै मुस्किल
राप्रपाको कार्यक्रममा प्रचण्डले केपी ओलीलाई हाने झापड, त्यसपछि जे भयो…..
कोरोना संक्रमणपछि उपचाररत प्रधानन्यायाधीश राणाको अवस्थाबारे अस्पतालबाट आयो यस्तो खबर
भीम रावलले भर्खरै गरे यस्तो डरलाग्दो निर्णय, एमालेमा खैलाबैला, अब के गर्छन ओली ?